LALATIANA RAVOLOLOMANANA : “Mila atambatra ny hery ho an’ny antoko mpanohitra”
“Tsy misy ny fanoherana eto amin’ny Firenena”, hoy ramatoa Ravololomanana Lalatiana. Nambarany, fa tokony hivondrona ary hamondrona ny angovo ireo antoko mpanohitra rehetra eto amin’ny Firenena, hoy izy. 1er février 2017
Raha ny fanazavana nentiny dia tsy ilaina ny fanonganam-panjakana fa ny fanoherena ataon’ny mpanohitra no hanalana izao Fitondrana manao didy jadona izao. Voalaza fa maro ireo milaza azy ho mpanohitra ary efa nitonona ho lehiben’ny mpanohitra, nefa toa tsy mitovy hevitra.
“Mila atambatra ny hery ho an’ny mpanohitra rehetra ary milà mivondrona sy mampitovy hevitra fa tsy zarazarain’ny foton-kevitra tsy mitovy”, hoy hatrany izy. Nambaran’i Lalatiana Ravololomanana ihany koa fa amin’ny alalan’ny fifidianana ara-demôkratika ihany no handraisana ny fahefana. Nahitsy fiteny ihany koa ity mpanohitra ity, fa tsy mahavaha olana ity Fitondrana Rajaonarimampianina.
Nitanisa zavatra maro izy, fa ny tena olana dia ny delestazy, ny tsy fandriampahalemana, ny fiakaran’ny vidim-bary sy ny saran-dalana, sy ny sisa. Fitondrana tsy izy ity, hoy izy, ka aleo atambatra ny angovo ho an’ireo mpanohitra rehetra hoentina manala izao Fitondrana tsy mahomby izao.